HomeWararka CiyaarahaArsenal oo xiiseyneysa xiddiga kooxda Red Bull Salzburg Roko Simic
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay il gaar ah ku heyso xiddiga kooxda Red Bull Salzburg ee Roko Simic .
18-sano jirkaan ayaa amaah lagu siiyay kooxda FC Liefering xilli ciyaareedka 2021-22, waxaana uu durba dhaliyay todobo gool 10 kulan oo uu saftay heerka labaad xilli ciyaareedkan.
Simic ayaa sidoo kale keydka ka soo kacay saddexdii daqiiqo ee ugu dambeysay guushii Champions League ee Salzburg ay ka gaartay Wolfsburg isbuucii hore – kulankiisii ​​ugu horeysay ee kooxda weyn – waxaana lagu soo waramayaa in horumarkiisa dhaqsaha badan aan la ogeyn.
Sida laga soo xigtay The Mirror , Arsenal ayaa u tartamaysa inay heshiis la gaarto Simic, kaasoo sidoo kale ku faanaya shan gool afar kulan oo uu u saftay Croatia Under-21s.
Si kastaba ha ahaatee, Tottenham Hotspur ayaa sidoo kale lagu tiriyaa inay xiiseyneyso weeraryahanka lagu qiimeeyo 7 milyan oo ginni,
Simic ayaa horay u matalayay Lokomotiva Zagreb ka hor inta uusan xagaagan ku biirin Salzburg, qandaraaska uu kula jiro kooxda reer Austria ma dhacayo ilaa 2025.